Chien-Shiung ဝူ: ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးအမျိုးသမီးရူပဗေဒပညာရှင်
အမျိုးသမီးရူပဗေဒပညာရှင်ရှေ့ဆောင် Chien-Shiung ဝူ, စမ်းသပ်နှစ်ခုအထီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ beta ကိုယိုယွင်းသီအိုရီခန့်မှန်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမရဲ့အလုပ်လူနှစ်ယောက်နိုဘယ်ဆုအနိုင်ရကူညီပေးခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူမနိုဘယ်ဆုကော်မတီကိုအသိအမှတ်ပြုမခံခဲ့ရပါဘူး။
Chien-Shiung ဝူ 1912 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် (အချို့သတင်းရပ်ကွက်များက 1913 ဆိုသညျကား) နှင့်ရှန်ဟိုင်းမြို့အနီးလျူဟို၏မြို့မှာကြီးပြင်းခဲ့သည်။ သူပါဝင်ခဲ့မတိုင်မီအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သောသူမ၏ဖခင်, 1911 တော်လှန်ရေး အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်သော မနျခြူး တရုတ်၌အုပ်စိုးသူမဟာကိုးနှစ်အရွယ်မှာသည်အထိ Chien-Shiung ဝူတက်ရောက်ခဲ့သည်ဘယ်မှာလျူဟိုတစ် Girls 'School တွင်ပြေးလေ၏။
Chien-Shiung ဝူဆရာမသင်တန်းအနောက်တိုင်း-oriented သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအပေါ် operated ရာ Soochow (Suzhou) Girls 'School တွင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တချို့ကပို့ချချက်အမေရိကန်ပါမောက္ခသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သူမသည်အဲဒီမှာအင်္ဂလိပ်သင်ယူခဲ့တယ်။ သူမလည်းသိပ္ပံနှင့်ကိုလေ့လာ သင်္ချာ သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်; သူကသူမ၌ရှိ၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူမလည်းနိုင်ငံရေးတွင်တက်ကြွစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် valedictorian အဖြစ် 1930 ခုနှစ်တွင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
1930 ကနေ 1934 မှ, Chien-Shiung ဝူ Nanking အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုတက္ကသိုလ် (နန်ကျင်း) တွင်လေ့လာခဲ့သည်။ သူမသည်ရူပဗေဒအတွက် BS နှင့်အတူ 1934 ခုနှစ်တွင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ လာမယ့်နှစ်နှစ်, သူမက X-Ray crystallography အတွက်သုတေသနနှင့်တက္ကသိုလ်အဆင့်သင်ကြားမှုကိုပြု၏။ အဘယ်သူမျှမတရုတ်အစီအစဉ်ကို Post-ဒေါက်တာဘွဲ့ရူပဗေဒ၌ရှိ၏အဖြစ်သူမသည်, United States မှာသူမ၏လေ့လာမှုများကိုလိုက်ရန်သူမ၏ပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကအားပေးအားမြှောက်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့် 1936 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးဦးလေးထံမှသူမ၏မိဘများနှင့်ရန်ပုံငွေများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ, Chien-Shiung ဝူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လေ့လာဖို့တရုတ်ထားခဲ့တယ်။
သူမသည်ပထမဦးဆုံးမီရှီဂန်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားထိုအခါမူကား၎င်းတို့၏ကျောင်းသားသမဂ္ဂမိန်းမတို့အားပိတ်ထားခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူမသည်မှာအစားစာရင်းသွင်း ဘာကလေမှာကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် သူမကပထမဦးဆုံး cyclotron များအတွက်တာဝန်ရှိသူနောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးနိုဘယ်ဆုသူ Ernest လောရင့်နှင့်အတူလေ့လာခဲ့ရာ။
သူမသည်တစ်ဦးနိုဘယ်လ်အနိုင်ရနောက်ပိုင်းမှာသူ Emilio Segre, ကိုကူညီခဲ့သည်။ ရောဘတ် Oppenheimer သည်၏နောက်ပိုင်းတွင်ခေါင်းဆောင် မန်ဟက်တန်စီမံကိန်း Chien-Shiung ဝူရှိခဲ့စဉ်အခါ, ဘာကလေမှာရူပဗေဒဒြေအပေါ်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
1937 ခုနှစ်, Chien-Shiung ဝူတစ်မိတ်သဟာယဖွဲ့ဘို့အကြံပြုခဲ့သည်ပေမယ့်သူမယူဆရသောကွောငျ့လူမျိုးရေးဘက်လိုက်မှု, အဲဒါကိုမခံမယူခဲ့ပါဘူး။ သူမသည်အစား Ernest Lawrence ရဲ့သုတေသနလက်ထောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်, ဂျပန်တရုတ်ကျူးကျော် ; Chien-Shiung ဝူနောက်တဖန်သူ့မိသားစုမတွေ့ရတော့ဘူး။
ဖိ Beta ကို Kappa မှရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော, Chien-Shiung ဝူသူမ၏ Ph လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဃရူပဗေဒအတွက်လေ့လာနေ နျူကလီးယား fission ။ သူမသည် 1942 ခုနှစ်သည်အထိဘာကလေမှာသုတေသနလက်ထောက်အဖြစ်ဆက်လက်နှင့်နျူကလီးယား fission အတွက်သူမ၏အလုပ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်သူမသည်တစ်ခုအာရှနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်ကောင်းကြောင့်, ဒြေဖို့ရက်ချိန်းမပေးခံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင်မဆိုအဓိကအမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်အဆင့်မှာရူပဗေဒဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အဘယ်သူမျှမအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိ၏။
1942 ခုနှစ်, Chien-Shiung ဝူ (စလုကာအဖြစ်လူသိများ) Chia လျူယွမ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကဘာကလေမှာဘွဲ့ရကျောင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာသားနျူကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင်ဗင်းဆင့်ဝေ-ချန်ထားပြီးခဲ့သည်။ ယွမ် Princeton, နယူးဂျာစီအတွက် RCA နှင့်အတူရေဒါ devices များနှင့်အတူအလုပ်ရရှိသောနှင့်ဝူမှာသှနျသငျတစျနှစျစတင် စမစ်ကောလိပ် ။ အထီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏စစ်အတွင်းရှားပါးမှုသူမထံမှကမ်းလှမ်းမှုတယ်ဓိပ်ပာ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် , MIT ကများနှင့် Princeton ။
သူမသည်သုတေသနချိန်းဆည်းကပ်ပေမယ့် Princeton, အထီးကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးနည်းပြဆရာမှာ non-သုတေသနချိန်းလက်ခံခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူမရေတပ်အရာရှိများမှနျူကလီယားရူပဗေဒသင်ပေးတယ်။
ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် ကသူတို့စစ်သုတေသနဌာနများအတွက်ဝူစုဆောင်း, သူသူမရဲ့အလုပ်တခုအဏုမြူဗုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြီးတော့-နေဆဲ-လျှို့ဝှက်မန်ဟက်တန်စီမံကိန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းခဲ့ 1944. ၏မတ်လရှိစတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်စီမံကိနျးအတှကျတူရိယာဖော်ထုတ်မယ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် stymied တဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းကူညီပေးခဲ့တယ် Enrico Fermi နှင့်ယူရေနီယံသတ္တုရိုင်းကြွယ်ဝဖို့ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူမသည် 1945 ခုနှစ်တွင်ကိုလံဘီယာမှာသုတေသနတွဲဖက်ပါမောက္ခအဖြစ်ဆက်လက်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏အဆုံးပြီးနောက်, ဝူသူမ၏မိသားစုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကွောငျးစကားလုံးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဝူနှင့်ယွမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်အတွက်လူအများကပြည်တွင်းစစ်ပြန်မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဆောင်တဲ့ကွန်မြူနစ်တို့၏အောင်ပွဲ၏မပြန်မလာခဲ့ဘူး မော်စီတုန်း ။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အမျိုးသားဗဟိုတက္ကသိုလ်သူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးရာထူးကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ဝူနှင့်ယွမ်ရဲ့သားဗင်းဆင့်ဝေ-Chen, 1947 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်; သူကနောက်ပိုင်းမှာနျူးကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်လာတယ်။
ဝူသူမက 1952 သူမရဲ့သုတေသနတစ်ခုတွဲဖက်ပါမောက္ခကအခြားသုတေသီများခြေခဲ့သောကြောင့်ပြဿနာများဖြေရှင်းရေး, beta ကိုယိုယွင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခန့်အပ်ခဲ့သည်ဘယ်မှာကိုလံဘီယာမှာသုတေသနတွဲဖက်ပါမောက္ခအဖြစ်ဆက်လက်။ 1954 ခုနှစ်မှာ, Wu နှင့်ယွမ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်လာခဲ့သည်။
1956 ခုနှစ်တွင်ဝူနှစ်ခုသုတေသီများ, ကိုလံဘီယာ၏ Tsung-Dao Lee နဲ့ကွာခြားမှုနှုန်း၏လက်ခံခဲ့သည်နိယာမအတွက်အပြစ်အနာအဆာရှိကွောငျးကိုဆိုခဲ့သူကို Princeton ၏ Chen က Ning ယန်နှင့်အတူကိုလံဘီယာမှာအလုပ်လုပ်လာတယ်။ အဆိုပါအသက် 30 နှစ်အရွယ်ကွာခြားမှုနှုန်းနိယာမညာဘက်၏အားလုံးအတွက်နှင့်လက်ဝဲလက်မော်လီကျူးတွဲဖက်အတွင်းပြုမူမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ Lee နဲ့ယန်ဒီစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းဆိုခဲ့ အားနည်းအင်အားသုံး subatomic interaction က။
Chien-Shiung ဝူစမ်းသပ်မှုတွေအ Lee နဲ့ယန်၏သီအိုရီကိုအတည်ပြုရန်စံချိန်စံညွှန်းအမျိုးသားဗျူရိုမှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ 1957 အသုံးပြုပုံဝူ K-meson မှုန်ကွာခြားမှုနှုန်း၏နိယာမကိုချိုးဖောက်ကြောင်းထုတ်ဖေါ်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။
ဤသည်ရူပဗေဒ၏လယ်ပြင်တွင်ဧရာမသတင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Lee နဲ့ယန်ကသူတို့အလုပ်အတွက်အဲဒီနှစ်နိုဘယ်ဆုအနိုင်ရ; သူမ၏အလုပ်ကိုအခြားသူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်များအပေါ်အခြေခံခဲ့လို့ဝူမချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ Lee နဲ့ယန်, သူတို့ရဲ့ဆုအနိုင်ရတဲ့အတွက်ဝူရဲ့အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအသိအမှတ်ပြုသည်။
1958 ခုနှစ်, Chien-Shiung ဝူကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကအပြည့်အဝပါမောက္ခလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Princeton သူမ၏ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ချီးမြှင့်။ သူမသည်သုတေသနကော်ပိုရေးရှင်းဆုကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်သတ္တမအမျိုးသမီးတစ်ဦးသိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီမှရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရဖို့။
သူမသည် beta ကိုယိုယွင်းအတွက်သူမ၏သုတေသနဆက်ပြောသည်။
1963 ခုနှစ်, Chien-Shiung ဝူစမ်းသပ်မှုတွေအနေဖြင့်တစ်ဦးသီအိုရီအတည်ပြုခဲ့သည် ရစ်ချတ် Feynman နှင့် Murry Gell-မန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် စုစည်းသီအိုရီ ။
1964 ခုနှစ်, Chien-Shiung ဝူသိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ, ထိုဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးအားဖြင့်ကုရုခ Comstock Award ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ 1965 ခုနှစ်တွင်သူမနျူကလီယားရူပဗေဒအတွက်စံစာသားကိုဖြစ်လာခဲ့သည်ထားတဲ့ Beta ကိုယိုယွင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။
1972 ခုနှစ်တွင် Chien-Shiung ဝူဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် 1972 ခုနှစ်, ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကတစ်စုံပါမောက္ခမှခန့်အပ်ခဲ့သည်။ 1974 ခုနှစ်တွင်သူမစက်မှုသုတေသနမဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်တစ်နှစ်တာသိပ္ပံပညာရှင်အမည်ရှိခဲ့သည်။ 1976 ခုနှစ်တွင်သူမအမေရိကန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ထိုနှစ်တွင်ပင်သိပ္ပံ၏အမျိုးသားတံဆိပ်ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ 1978 ခုနှစ်တွင်သူမရူပဗေဒအတွက် Wolf က Prize ကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
1981 ခုနှစ်မှာ Chien-Shiung ဝူအနားယူခဲ့သည်။ သူမသည်သင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ပေးဖို့ဆက်လက်နှင့်အများပြည်သူမူဝါဒအကိစ္စများမှသိပ္ပံလျှောက်ထားရန်။ သူမသည် "ခက်သိပ္ပံ" အတွက်လေးနက်သောကျား, မခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ကျား, မအတားအဆီးတခုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
Chien-Shiung ဝူသူမသည်ဟားဗတ်, ယေးလ်နှင့် Princeton အပါအဝင်တက္ကသိုလ်များမှဂုဏ်ထူးဆောင်ဒီဂရီကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း 1997 ၏ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက New York City, သေဆုံးခဲ့သည်။ သူမလည်း, ထိုသို့သောဂုဏ်အသရေလူနေမှုသိပ္ပံပညာရှင်သို့သှားကွ၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သူမ၏အဘို့အမည်ရှိတစ်ဦးဂြိုဟ်သိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
" ... ဒါကြောင့်သိပ္ပံဒါအနည်းငယ်အမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ်ရှက်စရာဖြစ်ပါတယ် ... တရုတ်နိုင်ငံခုနှစ်တွင်ရူပဗေဒအများကြီးအမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ်။ အမြိုးသမီးမြားသိပ္ပံပညာရှင်များအားလုံး dowdy ဖြစ်နေသည်ဟုဆိုခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းအမေရိကရှိတစ်ဦးအထငျမှားရှိပါသည်။ ဤသည်ယောက်ျား၏အမှားဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးကသူသည်အဘယ်အရာများအတွက်တန်ဖိုး, ယောက်ျားအောင်မြင်မှုမှသူမ၏အားပေးသေးသူမကထာဝရဣတ္နေဆဲဖြစ်သည်။ "
တချို့ကသည်အခြားကျော်ကြားသောအမျိုးသမီးတွေသိပ္ပံပညာရှင်များပါဝင်သည် Marie Curie , မာရီယာ Goeppert-Mayer , မာရိသညျ Somerville နှင့် Rosalind Franklin ။
အဲလစ် Freeman က Palmer က, Wellesley ကောလိပ်ကသမ္မတ
Madame က de Stael အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် Quotes
Panj Bania သတ်မှတ်ထားသော: အငါးခုတောင်းဆိုနေတဲ့ဆုတောငျးခကျြကဘာလဲရှိပါသလား
Palm Beach တွင်အတ္တလန္တိတ်တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
တက္ကသိုလ်ကမာရိ Hardin-Baylor ၏အဆင့်လက်ခံရေး
တစ်ဖယောင်းတိုင်သုညဆွဲငင်အားအတွက် Burn နိုင်ပါသလား?
ဘော့ - အနှေးထာဝစဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
Demeter - သူမရဲ့ညီအစ်ကိုများသစ္စာဖောက်ခြင်းအားဖြင့်
တစ်အမှောင်-ရင်ခွင် Entity အားဖြင့်သရဲခြောက်တယ်လို့